ပိုးတွေ့လူနာကို လာခေါ်သွားပြီး တအိမ်ထဲနေတဲ့လူတွေကို (၁၀) ရက်ကြာမှ လာခေါ်တဲ့ အဖြစ် - Zet Star
ပိုးတွေ့လူနာကို လာခေါ်သွားပြီး တအိမ်ထဲနေတဲ့လူတွေကို (၁၀) ရက်ကြာမှ လာခေါ်တဲ့ အဖြစ်
ကျွန်မ‌ယောင်္ကျား အနံ့အရသာမရတော့လို့ ဆေးရုံသွားပြရင်းနဲ့ swab ယူဖို့ဆိုပီး (၉) ရက်နေ့က ဆေးရုံတက်ရပါတယ် (၁၁)ရက်နေ့မှာ positive ဖြစ်နေမှန်း သိခဲ့ရတယ်။
Positive ဖြစ်ဖြစ်သိချင်း အိမ်ကို လော့ဒေါင်း လာလုပ်သွားတယ် အဲ့ကတည်း ကျွန်မတို့ကို အိမ်မှာပဲနေ ဆိုပြီးပြောတယ် ဘယ်သူဘယ်ဝါကမှ လာပြီး ကျန်းမာရေးကောင်းလား ဘာတွေကာကွယ်ရမလဲ ဘယ်သူမှလာမပြောပါဘူး ကျွန်မတို့ မိသားစုကကျန်းမာ‌ရေး ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ် ကျန်းမာအောင် အားရှိအောင်လို့ ဆေးတွေသောက်တယ် အားပြည့်မဲ့ အစားအစာတွေ စားတယ်
အခုဆိုရင် (၁၈) ရက် နေ့တောင် ဖြစ်နေပါပြီ။ အိမ်သူအိမ်သားတွေ အကုန်လုံး နေကောင်းကြပါတယ် အခုချိန်ထိလဲ ဘာလက္ခဏာမှ မပြပါဘူး အဲ့ဟာကို အခုမှလာပီး Q ထားမယ်။ ဒီနေ့လာခေါ်မယ် ဆိုပြီး ပြောပါတယ် ကျွန်မပြောချင်တာ အိမ်မှာ positive လူနာတွေ့ကတည်းက လာခေါ်လေ အခုမှ Qထားမယ်ဆိုပြီး လာပြောရတာလဲ?
အခုဆို လူနာနဲ့ မထိတွေ့ခဲ့တာ (၁၀)ရက်တောင်ရှိနေပါပြီ အခုမှ လာခေါ်မယ်ဆိုတော့ ဘယ်နှရက်တောင် ထပ်နေရဦးမှာလဲ အိမ်မှာကလဲ အသက်ကြီးတဲ့အဖိုးရယ် ရင်ကျပ်ရှိတဲ့ ညီမလေးရယ် ကလေးရယ်ရှိပါတယ် အဲ့ရောက်မှ ကူးမှာကလဲ စိတ်ပူရသေးတယ်။ ဟိုကိုဖုန်းဆက်တော့လဲ ဒီကလုပ်တာ ဒီကိုပြောတော့လဲ ဟိုကလုပ်တာဆိုပြီး မသိဘူးပဲပြောနေတယ်။
တစ်ချို့ကျတော့ positive ဖြစ်ဖြစ်ချင်း အိမ်ကလူတွေကို လာခေါ်သွားတယ် ကျွန်မတို့ကိုကျတော့ ဘာလို့ ချက်ချင်းလာမခေါ်တာလဲ? ကျွန်မကလဲ ဆေး(၁)က ဝန်ထမ်းပါ လာ‌ခေါ်ရင်တော့ နည်းနည်းတော့ ကွန်ပလိန်း တက်လိုက်ဦးမယ်။ အခုတော့ လာခေါ်မယ်ဆိုလို စောင့်နေပါတယ်။
← ကိုဗစ်နဲ့ တုပ်ကွေး၊ အအေးမိ လက္ခဏာများ ကွဲပြားပုံ (တခုခုဖြစ်ရင် ခွဲခြားနိုင်အောင် သိထားသင့်ပါတယ်)
မင်းသမီး နန္ဒာလှိုင်၏ မတ်တော်စပ်သူ ဦးငွေဇော် ကိုဗစ်ကြောင့် ရုတ်တရက် ကွယ်လွန်၊ နန္ဒာလှိုင် Home Q ဝင်နေရ →